Semalt: Izindaba Ezingaphambili-Ikhasi Ezokuphepha Kwewebhu
Uma kukhona yini abantu abangayifunda kusukela ngonyaka ka-2016, bangakwazi kanjani ukuzivikelakusuka ekungeneni kwe-hacker. Ngenhloso yokwazisa, uFrank Abagnale, the i-Semalt Isiphathi Esiphezulu Sokuphumelela Kwekhasimende, sifinyathele izindaba eziyisikhombisa eziphezulu ezifakwe kulo nyaka.
1. IHack yilelo elaseDropbox
Ukuhlaselwa okulodwa kwesithakazelo esikhethekile yi-Hack yeDropbox, eyathinteka kakhuluabasebenzisi bayo. Kwaholela ekusakazeni kabanzi ngabamemezeli njengoba kwakukhona izigidi ze-akhawunti yomsebenzisi eyonakele. Kuyinto isenzakalo esiqokomileisidingo esibucayi sokuthi abantu basebenzise amaphasiwedi aqinile futhi ayingqayizivele, nomkhankaso wokuqinisekisa ukuthi izinkampani zinikeza izidingo ezinjalo kumakhasimende abo.
2. I-Dyn DNS DDoS Attack
UDyn ungumhlinzeki we-DNS owahlukunyezwa ngo-Okthoba 21 ngo-2016. Wenziwa ngokusebenzisai-botnet ye-Mirai ejwayele ukusetshenzwa kumadivayisi we-IoT okuholela ekuphuculeni kwamawebhusayithi amakhulu. Akuyona imfihlo ukuthi abahlaseli bahlose amadivayisi we-IoTngenxa yobungozi babo abaningi. Noma kunjalo, into eyodwa abasebenzisi abayifunde kulesi siqephu ukuthi i-IoT engaphephile ingaba kanjani lapho ingenaizandla ezingalungile.
3. Umthetho Wamandla Okuphenya wase-UK
I-UK idlulisele enye yezinkokhelo zabo eziphambene kakhulu, uMthethosivivinywa Weziphenyo Zophenyo, lokhokwandisa ububanzi bokubhekwa ngegama lokuqeda ubuphekula nokuthuthukisa ukuphepha. Iziphathimandla ze-IT manje zinokufinyelela kumalogi womsebenzisingaphandle kokudinga iwaranti, njengoba behlala bengenakulungiswa ohlelweni izinyanga eziyishumi nambili. Le nkinga yaphakamisa izingxabano mayelana nokuhlola kukahulumenikanye nezilinganiso..Babuye baphakamise imibuzo mayelana nokuthi ubukhulu buhamba kangakanani ngokuqondene nobuyimfihlo.
4. I-Hack ye-Bitfinex
I-Cryptocurrency yaqala ukuthola ukuvikeleka kokuqwashisa ngemuva kokuthi abaduni bangene ngemvumeUkushintshaniswa kwe-Bitfinex. Ngisho noma lelo qembu likhokhela abasebenzisi balo, abantu baqala ukuhlola kabusha isinqumo sokutshala izimali eBitcoins kusukela ezinjaloyezokuhwebelana ezingenasoze zinikeze isinxephezelo. Isihloko asikho ngokuphelele emahlathini kodwa uhulumeni namabhange baqala ukwamukelaumqondo wokusebenzisa ama-bitcoins njengendlela yokushintshanisa ngemali ngo-2017.
5. I-Dirty Cow Exploit
I-COW Ezingcolile I-Exploit yingozi ekukhoneni kwe-Linux evumela ukuthi abaduni bazuzeamalungelo okuphatha kwikhompyutha okungenani imizuzwana emihlanu. ULinus Torvalds wabika ukuthi babengazi ukuthi ukhona nokuthiuzame ukukulungisa eminyakeni eyishumi edlule. Isebenza njengesibonelo sokuthi uhlelo lwama-age bugs luba kanjani njengengozi ebalulekile esikhathini sangaleso sikhathiumhlaba wedijithali, uqinisekisa ukugcinwa kokuphepha kohlelo.
Unyaka wezi-2016 wenyuka ekuhlaselweni kwesihlengo. Bahlose uhla lwabanyeizinhlangano, enikeza isibonakaliso esicacile sokuthi akekho okhululwa ekuhlaselweni kwe-ransomware. Ukuphakamisa ukuqwashisa ngezinyathelo zokuzivikela, nokuphephaezinye izindlela zokuhamba ngokuvimbela abasebenzisi kusuka ku-ransomware esikhathini esizayo.
7. Inselelo enkulu ye-Cyber ​​enkulu ye-DARPA
Inselelo enkulu ye-Cyber ​​yi-DARPA ihloselwe ukumema amaqembu ukuba ahlasele futhi asebenzise uhleloukukhubazeka. Lezi zinselelo zimbalwa kakhulu ukuxhumana kwabantu njengoba zivame ukuzenzekelayo
Ikusasa Lokuvikeleka Kwezinhlelo ngo-2017
Akukho okushiwo ukuthi kwenzekani ngo-2017. Noma kunjalo, abahlaseli bahlala bebhekileukukhubazeka okuningi. Abahlaseli bangase bathuthukise ukuhlaselwa kwabo ukuze bahlose izixhumanisi ze-Tor, nokunye ukuxhaphaza nokusebenzisa uphawu oluthile olwinkimbinkimbi ngenkathikuyo. Into enhle ukuthi phakathi kwezinto ezimbalwa ezenza umgwaqo ngo-2017, ukuqwashisa ukuphepha.